Maajo 10, 2017 7:10 g 4
Kulanti wanaagsan ku soodhowaada barnaamijkii cawaysnimo ee Caawa & Daljir, waxaana xarunta Daljir Bossaso caawaysinkan ka soo jeedinaya Axmed Shiikh Maxamed Tallman.
Madaxweynaha Faransa: “Haddii Xaaskaygu 20 Sano iga Yaraan lahayd Laba Cali isma Weydiiseen”
Warkii Fiidnimo & Subeer Shiikh Cabdi (dhegayso)
gacayga waa Axmed C/raxmaan faarax 4 years ago
asc idaacada daljir iyo dhamaan wariyayaasheeda sharafta leh run ahaantii waxaan kamid ahay dhagaysta yaashe idaacada daljir runtii waxaan aad udhagaystaa 3 baraamij oo idaacada kabaxa waxayna kala yihiin caawa iyo daljir xulsshada iyo baraamijka maanahadal ee jimcaha soogala
Shirka london sida uu nabadoonku sheegay somalia wa waa dal khayraadkiisa ay kaydsan yihiin meel istaraatiiji ahna ku yaaal
Ingiriis iyo maraykana baahi u qabaan marka soomaalida waxa la gudboon fursadaha hor yaacaya inay ka faaiidaystaaan
Mohamed Nour kilwe 4 years ago
Asc dhaman bahda daljir.
Waxan ka mid ahay kutaxanayaasha daljir, idaacad kale madhagaysto hadaysan dani igu kalifin,waliba 2barnaamij aad ban ugu taxanahay caawa iyo daljir iyo xulashada daljir, daljir waa idaacad la isku haleynkaro soo tabisa warka xaqiiqdiisi.
Warka caawa aad ban uga mahadcelinayaa sida wanagsan ee la isugu dubaridey.
War lahelaaaba talo lahel.
Run Ahaantii Barnaamijka caawa cawayska Daljir aad baa an ugu xirnahay runtii waxaaba i xiiso galisay wararka Updetka Ah eee bulshada u tabisaaan
U Jawaab Mohamed Nour kilwe Buri halceliska